China digital anodhinda lapel pini fekitori uye vagadziri | Kingtai
Aya mapini anowanzo shandiswa nevatengi vezviitiko zvikuru zvekushambadzira, marogo emakambani, uye zviitiko zvekurangarira Iwe unozogashira ako epasita mapepa mapepa pamusoro pevhiki.
Kana tagamuchira dhizaini yako, isu tinobvunza mugadziri wedu kuti akweverere iwe.Ukasimbisa iwe ruzivo rwese rwatichazoburitsa maererano nemufananidzo.Zvinhu zvedu zvikuru izinc chiwanikwa, kana iwe uchida zvimwe zvinhu, isu tinogona zvakare kuburitsa. Mienzaniso: simbi isina simbi, mhangura Nguva yekugadzira: Mazuva mashanu ebhizinesi mushure mekubvumidzwa kwehunyanzvi. Kugadzira nekukurumidza kunowanikwa.
Yakasarudzika simbi lapel pini Rinozvikudza Yakagadzirwa muUSA. Ngarava mumazuva mashanu ebhizinesi.
Nhanho yekutanga yemabheji edu inowanzo simbisa kudhirowa uye nekuronga kugadzirwa.Kutanga pane zvese, zvinotora mazuva 3-5 kuvaka chigadzirwa chitsva chandinoumba.Sechipiri, tinoda kunwa zvigadzirwa. Kune ichi chikamu, yedu yezuva nezuva yekugona kugona ingangoita 10000pcs pamushini.Thirdly, kana dhijitari yekudhinda lapel PIN yakaitwa, isu tinonanga electroplate iro vara raunoda. Chechina, purinda dhizaini dhizaini yechigadzirwa.Kana tichida iyo epoxy, tinogona kuiwedzera kune ichi chigadzirwa zvakare, icho zvakare chinova imwe maitiro.Iwe unogona kusarudza maitiro aunoda!
Tsika Offset Dhijitari Dhiripiti Lapel Pini Kubvisa dhijitari lapel pini dzakakwana kune zvigadzirwa zvinoshandisa mifananidzo uye pendi kana zvinoda zvimwe zvakanaka ruzivo muvara. Iyo sarudzo yakanaka kune yakasarudzika mifananidzo iyo inoshandisa gradients kana kudonhedza mimvuri. Imwe neimwe tsika dhizaini inogadzirwa kubva kudhijitari faira, yakadhindwa yakananga pabepa repamusoro-soro iro rakanamirwa kune simbi yesimbi, uye bhatani rinobva ravharwa neepesi yakajeka yekupedzisa kuchengetedza pini yako yemakore kwemakore anouya.
Maitiro etsika ekudzikisa dhijitari anodhinda lapel pini inoitwa. Kusiyana neiyo enamel yakaoma, yakapfava enamel, uye inofa yakanamatira mapini, mapelini mapini akagadzirwa achishandisa nzira yekukanganisa yedhijitari akatsetseka uye akatsetseka. Tsika dzinodzora mapini edhijitari ako ekuenda-kupini kwemavara ane mavara uye mifananidzo yakaoma kana dhizaini. Iko hakuna mukana wemavara anomhanya kana kubuda ropa, uye zvinyorwa zvinoratidzika kunge zvakapfava uye zviri nyore kuverenga zvisinei kuti ndeapi mafonti aunosarudza. Kukanganisa mapini edhijitari ane kupenya kunopenya kunogara kwenguva refu. Iko hakuna kudikanwa kwekushushikana nezve guruva kana tsvina kuunganidza nekuti hakuna nzvimbo dzakadzoserwa. Pini yakatsetseka inoramba kubata majuzi kana tambo, uye inogona kugadzirwa mune chero chimiro chaunogona kufungidzira. Masizi anotangira pa3 / 4-inch kusvika 2-inches, uye zviyero zvekuodha zviripo kubva ku100 kusvika 10,000+.
Pashure: 2D pini bheji
Zvadaro: Anopenya Lapel Pins
Dhijitari Dhinda mapepa mapepa